Umaki: idatha enkulu | Martech Zone
I-Tag: idatha enkulu
Kukhulisa inani ledatha enkulu nge-Pepperdata's Big Data Stack Optimization kanye ne-Automated Tuning
NgoLwesine, Septhemba 17, 2020 NgoLwesine, Septhemba 17, 2020 U-Ash Munshi
Lapho kukhonjiswe kahle, idatha enkulu inganamandla amakhulu ekusebenzeni. Idatha enkulu manje idlala indima ebalulekile kuyo yonke into kusuka emabhange kuya ekunakekelweni kwezempilo kuya kuhulumeni. Isibikezelo esimangazayo sokukhula kwemakethe yedatha enkulu emhlabeni, sisuka ku- $ 138.9 billion ngo-2020 saya ku- $ 229.4 billion ngo-2025, kukhombisa ngokusobala ukuthi imininingwane emikhulu manje isiyisakhiwo esihlala njalo kwezamabhizinisi. Kodwa-ke, ukukhiqiza inani elikhulu kakhulu kunedatha yakho enkulu, izidingo zakho zesitaki sedatha yakho enkulu
NgoLwesibili, Januwari 22, 2019 NgoLwesibili, Januwari 22, 2019 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi igama elithi ukuphazanyiswa linomqondo omubi. Angikholwa ukuthi ukumaketha kwedijithali namuhla kuphazamiseka yinoma yibuphi ubuchwepheshe besimanje, ngikholwa ukuthi buyathuthukiswa yibo. Abakhangisi abaguqula futhi basebenzise ubuchwepheshe obusha bayakwazi ukwenza ngezifiso, ukubandakanya, nokuxhumana namathemba abo namakhasimende ngezindlela ezizwakalayo. Izinsuku ze-batch kanye ne-blast ziyashintsha ngemuva kwethu njengoba izinhlelo ziba ngcono ekuqondiseni nasekuqageleni ukuziphatha kwabathengi namabhizinisi.